C/raxmaan C/shakuur “In lacag doollar oo been abuur ah lasoo geliyo Bankiga dhexe waa wax halis ku ah Qaranka Soomaaliya..” – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
C/raxmaan C/shakuur “In lacag doollar oo been abuur ah lasoo geliyo Bankiga dhexe waa wax halis ku ah Qaranka Soomaaliya..”
Siyaasi C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah musharaxiinta u tartameeysa doorashada sanadkaan ee xilka madaxtinimo Soomaaliya oo maanta shir jaraa’id ku qabtay magaalada Muqdisho ayaa si kulul uga hadlay arrimaha ku saabsan lacagtii dhawaan la sheegay in lagala baxay Bankiga dhexe ee Soomaaliya.
C/raxmaan C/shakuur ayaa sheegay in arrinkaasi ay musharixiinta iyo bulshada Soomaaliyeed shaki badan ku abuurtay in lacagtaasi loo adeegsado doorashada madaxtinimo ee Soomaaliya.
Wuxuu siyaasi C/raxmaan C/shakuur sidoo kale tilmaamay in lacagta gaareysa $530,000 (Shan Boqol Iyo Sodon Kun ee Doolarka Mareykanka ah) lagala baxo Bankiga dhexe ay muujineyso mid halis ku ah amniga iyo xasiloonida suuqa maaliyadda Soomaaliya, xilli dalka ay kusoo wajahan yihiin doorashooyin qaran.
“In lacag doollar oo been abuur ah lasoo geliyo Bankiga dhexe waa wax halis ku ah Qaranka Soomaaliya, sidaas awgeed waxaan codsanayaa in arrintaasi baaritaan madax-banaan lagu sameeyo iyo waxa kusoo beegay xilliga doorashadda, waxaan sidoo kale codsanayaa in baaritaan lagu sameeyo in madaxda dowladda ay arrinkaan ku lug leeyihiin iyo inkale” Sidaasi waxaa yiri siyaasi C/raxmaan C/shakuur.
Siyaasi C/raxmaan C/shakuur ayaa sidoo kale shaki ka muujiyay tiradda rasmiga ah ee gudoomiyaha bankiga dhexe sheegay in lagala baxay Bankiga, wuxuu tilmaamay inuu aaminsan yahay in tiradaasi ay ka badan tahay, islamarkaana ku taliyay in arrinkaasi baaritaan sax ah lagu sameeyo.
Si kastaba ha ahaatee, hadalkaan kasoo yeeray Siyaasi C/raxmaan C/shakuur Warsame oo ka mid ah musharixiinta u tartameeysa doorashada sanadkaan ee xilka madaxtinimo Soomaaliya ayaa kusoo beegmaya xilli la sheegay in Bankiga Dhexe ee Soomaaliya lagala baxay lacag ka badan nus milyan doolar, taas oo shaki laga keenay inay ka badan tahay tiradaasi.